REENOEMANN: April 2009
တမ်းတရင်း ရင်မှာ လွမ်းဆွတ်
သတိရနေတယ် ..... အမေ
အမေ့ရဲ့ မေတ္တာ စာဖွဲ့လို့မရ
သတိယ မိတာ အမေ တစ်ယောက်ထဲပါ
အနန္တမေတ္တာ ပိုင်ရှင်ပါပဲ ........အမေ
မှတ်ချက်။ ။ သားသမီးအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 1:50:00 AM5comments:
Posted by Ree Noe Mann at 6:45:00 PM 1 comment:
စိုလက်နေတဲ့ အမေ့ မျက်ဝန်းကို
အမေနဲ့ဝေးအောင် ဖန်တီးတဲ့ ကံကြမ္မာကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား
ဖြစ်ချင်တာတွေ သိပ်များတဲ့ ငါ့ လောဘကိုပဲဒေါပွရမလား။ ။
အဝေးက မေမေ့ ကို .. အတွေးနဲ့ပဲ လွမ်းရတယ်
(ကျန်းမာပါစေ မေမေ.. ဆုခြွေ)
ကဗျာပိုင်ရှင် - အဖြူရောင်နတ်သမီး
Posted by Ree Noe Mann at 12:41:00 AM7comments:
ဒီလိုပါ........ ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်လေး ကိုလာလည်ကျတဲ့ ညီအစ်ကို၊မောင်နှမတွေကို
ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို သိရပင်မဲ့ ကိုယ့်ထက် ကြီးမှန်း ငယ်မှန်းမသိရဘူးဖြစ်နေတယ်။
တစ်ချို့မောင်နှမတွေက Profile မှာ အသက်ကိုဖေါ်ပြထားကြပင်မဲ့ တစ်ချို့ ကဖေါ်ပြထားခြင်း
မရှိပါဘူး။ ( သိကြားမင်းကြီးသိမှာ ကြောက်လို့ ထင်ပါရဲ့)
အဲ့တော့ အိမ်ကိုလိုက်လည်တဲ့ အခါကျရင်း အစ်ကိုပဲခေါ်ရမလား ညီပဲခေါ်ရမလား
အမလား ညီမလား မသိဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကလည်း မြန်မာထဲက မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ တစ်ယောက်နဲ့
တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်တဲ့ အခါ မြန်မာတစ်ယောက်လို နှုတ်ဆက်ချင်ပါသောကြောင့်
Posted by Ree Noe Mann at 12:41:00 AM 11 comments:
ခုမြင်နေရတာ လိမ္မော်သီးလေးတစ်လုံးပါ။ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ တော့...............................
forward mail တစ်ခုမှ ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 5:32:00 AM4comments:
လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဖို့ တွေးနေရတာနှင့်
အမေ့ဆွေးမြေ့မှုတွေလဲ ငါ မတွေးတတ်ခဲ့ဘူး
ယဲ့ယဲ့လေး ကျန်တဲ့ ခံနိုင်ရည်အားနဲ့
တားမရတဲ့ အိမ်လွမ်းစိတ်ကို ဖြေဖို့
အမေ့စကား နားမထောင်ပဲ ငိုနေခဲ့တာ
မျက်နှာတဖတ်လွဲ မျက်ရည်တွေပဲ ၀ဲနေမလား
(ကျေးဇူးပြုပြီး ခဏလောက် ငိုပါရစေ အမေရယ်)
ချိုမယ် ခါးမယ် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်
ဝေဟင်ထဲ ဖြတ်တဲ့ လေယာဉ်သံကြားတိုင်း
ယောင်ယောင်ပြီး ငေးမောနေခဲ့ အခါခါ
(ငါ့အသည်း ထင်သလောက်လဲ မမာပါလား ကံကြမ္မာ)။
ဒီရင်ထဲ လာလာ အလင်းပြန်တဲ့ ပုံရိပ်ကလည်း
တခါ တခါ ဆို
မိသားစု နှင့် ဝေးဖို့ မတွေးတတ်ခဲ့တာ
ဒီအသည်း မဆွေးတတ်ခဲ့လို့ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း
နင် သိအောင် ဘယ်လို ပြောရမလဲ။
အဲဒီမျက်ရည် တွေကို ကျောခိုင်းဖို့
ငါ့ရင်လည်း သွေးအစက်စက် ကျခဲ့ရတာပါကွယ်။
ကဲ ပြောလှည့်ဦး ကံကြမ္မာ.........
ဘာကြောင့်များ ညည်းချင်းတွေ နင်ပေးသလဲ ဆိုတာ...
ကဗျာ ပိုင်ရှင် - White Angel
မှတ်ချက်။ ။ အမေများနေ့ အတွက် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရေးထားသော
ကဗျာ တစ်ပုဒ် နှင့်အတူ သူငယ်ချင်းများဆီ တောင်းခံထားသော
ကဗျာများအား ဆက်လက် ဖေါ်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူချင်း မမြင်ဖူးကျပင်မဲ့ စိတ်ချင်းရင်းနှီးနေကြတဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းများအားလုံး စိတ်ဝင်းစားတယ်ဆိုရင်
အမှတ်တရအနေနဲ့ အမေများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြစ်သော၎င်း၊ ကျွန်တော်ကိုခင်မင်သောအားဖြစ်သော၎င်း အမှတ်တရ အမေနဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ များအားပေး ပို့ပေးကြပါဗျာ။
ဒီ email သို့ reenoemann@gmail.com ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဗျာ
Posted by Ree Noe Mann at 10:10:00 PM3comments:
ဒီ တစ်ပတ်ရဲ့ ကံထူးရှင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ American Idol ရဲ့ ပျော်ရွှင်စွာအိမ်ပြန်ခြင်း အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူကတော့ Anoop ဖြစ်ပါတယ်။
ုLil လည်း ဒီ တစ်ပတ်မှာ ကံထူးရှင် စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ Top7ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 4:52:00 AM No comments:
Posted by Ree Noe Mann at 1:07:00 AM2comments:
ငါ.. ကျေနပ်စွာခံယူဆဲပါ။ ။
Posted by Ree Noe Mann at 10:43:00 PM3comments:
ကဗျာပိုင်ရှင် - White Angel
Posted by Ree Noe Mann at 1:20:00 AM 8 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 7:52:00 PM3comments:
Posted by Ree Noe Mann at 5:00:00 AM2comments:
Posted by Ree Noe Mann at 5:00:00 PM2comments:
Posted by Ree Noe Mann at 2:59:00 PM4comments:
Posted by Ree Noe Mann at 1:17:00 AM2comments:
ဒီတစ်ပတ် American Idol အစီအစဉ်ကတော့ တမျိုးထူးခြားနေပါတော့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျွန်တော် ရေးခဲ့သလိုပဲ Season တလျှောက်လုံးမှာ ဒိုင်းလူကြီး
များရဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ One More time ကို ရရှိသွားတဲ့ လူကတော့
Matt ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား၊ ကံဆိုးတယ်ပဲပြောရမလား
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နောက်လာမဲ့ အပတ်မှာ Out of Performances က နှစ်ယောက်
ဘယ်သူတွေများလဲ ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 11:04:00 PM2comments:
သူနာမည်ကျ တော့ Aweera ပါ။ မြန်မာလို နားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ အသံသေး အသံကြောင် အားကောင်းလူပါ။ တော်တော် အော်နိုင်တယ်။ ဘာတဲ့ အမေပြောတာ မှတ်မိသေးတယ် " မိန်း မ ရွှင် အသံ ဆိုလား ဘာလားပဲ"
ပိုက်ဆံ One Million များရမယ်ဆိုရင် မလိုချင်ဘူးလားဗျာ။
ဘာမှ သိပ် အရင်းထုတ်စရာ မလိုဘူး ပင်ကို အသံလေးနဲ့ လုပ်စားရုံပဲ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ နောက်နှစ်ပေါ့...........
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခုအစီအစဉ်က Top5တောင်ရောက်သွားပြီဗျ။
မိန်းကလေးနှစ်ယောက် နဲ့ ယောက်ကျားလေး သုံးယောက်
ပထမရတဲ့လူက One Million မလေးရှား ရင်းဂစ်လ် ကို ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို စိတ်ဝင်းစားတယ် ဆိုရင်တော့ မလေးရှား လိုင်း TV 8 မှာ
သောကြာနေ့ည ၉နာရီ ခွဲမှာ ကြည့် ရှူခံစားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
သူမ နာမည်က Esther တဲ့ ။ One Million ရချင်လို့ဝင် ပြိုင်နေတာပါတဲ့။ အသံ နဲ့ တီထွင်မှု ကောင်းတယ်။
သူနာမည်က Nine ပါ။ ထွက်နိုးထွက်နိုး နဲ့ ယက်ကန်းယက်ကန်း ပါလားတဲ့ လူပါ။
မျက်နှာချိုတယ် ၊ စတိုင် ကျတယ်။
Tomok ပါ။ ဒိုင်းတွေနှစ်သက်ချင် ကို ခံနေရတဲ့လူပါ။ အားလုံးထဲမှာ 1 ပြေးနေတဲ့ လူပေါ့ ။ အသံကောင်းတယ်။
ဖျော်ဖြေမှု အကောင်းဆုံး စတိုင်အရှိဆုံးလူ လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
သူမကတော့ Amylea ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသံမဆိုးပါဘူး ကိုယ်တိုင်ရေး သီချင်းတွေဆိုပါတယ်။
ကဲ ဘယ်သူများ ဘိုင်ဘိုင် လုပ်မလဲ ဆိုတာတော့ ဒီလာမဲ့ သောကြာနေ့ကို စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 1:15:00 AM 1 comment:
Posted by Ree Noe Mann at 9:17:00 PM4comments:
Posted by Ree Noe Mann at 1:02:00 AM4comments:
လောကမှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ချမ်းသာမှုရှိမယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ ၀မ်းနည်းရမယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ပေါင်းမြှောက်များစွာ နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ ၀မ်းသာရပင်မဲ့၊ မနက်ဖြန်မှာ ၀မ်းနည်းနေရတက်တယ်။လိုတာမရ ရတာမလို ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။
လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ ပြည့်စုံတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာ။
နေဒေးသစ်ရဲ့ ပို့စ် နှစ်ခုလုံးကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ ပထမ ပို့စ်အတွက် Comment ရေးနိုင်ပင်မဲ့၊ ဒုတိယ ပို့စ် အတွက်
မရေးနိုင်ခင်မှာပဲ Edit လုပ်လိုက်တာကို တွေ့ရတယ်။
နေဒေးသစ်ရဲ့ဒုတိယ ပို့စ်ကို ဖတ်ရပြီး " နေဒေးသစ် သို့ အမှတ်တရ " ဆိုတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
အမိမဲ့သား ၊ အကွတ်မရှိတဲ့ တောင်း ၊ ကာရံမဲ့တဲ့ ကဗျာ လို့ပဲ ဘလော့ဂ် တစ်ခုမှာလည်း C Box မရှိရင်တစ်ခုခု လိုအပ်နေသလိုခံစားရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်မင်လာခဲ့ကြတာ ဒီ C Box လေးကြောင့်ပါ။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မသိပဲ ပြောဆို နှုတ်ဆက်ကြရင်းနဲ့ Online မောင်နှမတွေအဖြစ်နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ။
C Box ကြောင့် စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာကို ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ တစ်ခုလောက်တော့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
နေဒေးသစ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ လမ်းမှာတွေ့ရင် မခေါ်ပဲနေလို့ရလား။
အဲလိုပဲ နေဒေးသစ်ရဲ့ ဘလော့ဂ် ကို သူငယ်ချင်းတွေ လာလည်တဲ့အခါ နေဒေးသစ်ကို သာကြောင်း၊ မာကြောင်း မမေးရပဲ ဒီအတိုင်းပြန်ထွက်သွား စေချင်တာလား။
C Box ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့လို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိကြတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ပေါင်းကူး တံတားလေးပါ။
အောင်မြင်ချင်တဲ့လူဆိုတာ ဝေဖန်ပြစ်တင်ချင်ကို မကြောက်ရဘူးဗျ။
ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်အတိုင်းပဲ သူ့လမ်းသူသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့ အကျိုးခံစားရမှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ စိတ်မကောင်းစရာလေးတွေကို ဖယ်ပြီး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အရင်အတိုင်း လေးပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။
သူငယ်ချင်းများ ကိုယ်စား ကျွန်တော်ကပဲ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။ C Box ကို ပြန်လည်ထားစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခင်မင်မှု ကို အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုရင်....................................
Posted by Ree Noe Mann at 7:47:00 PM 1 comment:
Posted by Ree Noe Mann at 8:59:00 PM2comments:
ဒါပေမဲ့...ကြိုက်တဲ့သူရှေ့ကျတော့ပျော်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 8:59:00 PM 1 comment:
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ ရတာပါ။ဖြစ်နိုင်၊မဖြစ်နိုင်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့် ကြပါတော့ဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 2:13:00 PM4comments:
Scott MacIntyre ( Season 8 )
American IDOL Season 8 မှာ ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့
ပရိသတ်အား ကောင်းကောင်းရရှိခဲ့တဲ့ မျက်မမြင် အဆိုတော် Scott ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အသံအားကောင်းလို့လဲ TOP 8 ထိပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ပရိသတ်ရဲ့ ဘက်မလိုက်အားပေးမှုကြောင့် TOP7ရွေးချယ်ခြင်းမှာ
လက်ပြနှုတ်ဆက် သွားသူကတော့ မျက်မမြင် Scott ပါ။
Read More အားဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ.
TOP 13 မှစပြီး TOP 8 ထိ ဒိုင်းများ ရဲ့ Go Home ကိုသာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာ Scott အတွက် ထူးခြားမှု တစ်ခုကတော့ ဒိုင်းလေးယောက်ထဲမှ Paula နဲ့ Kara
တို့ရဲ့ saved ရခဲ့ပြီး၊ Simon နဲ့ Randy တို့ရဲ့Go Home ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် Simon ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ Paula နဲ့ kara ရဲ့ ဆန္ဒတွေ မပြည့် ဖြစ်သွားရပါတယ်။
ဒိုင်းများရဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ Season တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဒိုင်းများကြိုက်နှစ်သက်သူ
တစ်ဦးအား Save ခွင့်ရှိပါတယ်။
ယခု Top7 ထိတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရရှိခဲ့သေးပါဘူး။
နောက် ၇ဦးထဲမှ ဘယ်သူများ ကံကောင်းမလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမှာပေါ့။
ဒီတစ်ပတ်တော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ Good Bye Scott ရေ.................
Posted by Ree Noe Mann at 1:55:00 AM No comments:
Singapore နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေသူတစ်ဦး ဆီမှ ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 1:01:00 AM5comments:
စာရေးချင်တဲ့ စိတ်ကတော့ရှိပါတယ်။ ဘယ်ကဘယ်လို စရေးရမှန်း မသိတာကခက်နေတယ်။
ဒီ ဘလော့ဂ်လေး စလုပ်တာ တစ်ပတ်ပဲရှိဦးမယ်။ သူငယ်ချင်း အများကြီးရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာကျေနပ်ရပါတယ်။
ဒီ ဘလော့ဂ်လေးကို စမလုပ်ခင်က ကျွန်တော် ကိုစိုင်းထွန်း ရဲ့ www.royal-myanmar.com လေးကို
အမြဲတမ်း သွားလည်ဖြစ်တယ်။ ခုချိန်ထိ ပဲဆိုပါတော့။ သူ့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ လျှောက်ဖတ်ရင်းနဲ့
ဘလော့ဂ် လုပ်နည်း စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ဒီ ဘလော့ဂ်လေး (reenoemann) ကို စတင်ခဲ့တာပါ။
ကိုစိုင်းထွန်း ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ လူချင်း တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ Blogger သူငယ်ချင်း တွေအများ ကြီးနဲ့သိလားခဲ့ရတယ်။
သူငယ်ချင်းများဆီမှ ဗဟုသုတ တွေရော မဟုတ်သုတ်ခ တွေကောအများ ကြီးသိလာခဲ့ရတယ်။
ဒီ ဘလော့ဂ်လေး ကို အားရှိအောင် အားဆေးတွေလာအော်ပေးကြတဲ့ ကိုစိုင်းထွန်း၊ မောင်စေတနာ၊
ကောင်းကင်ပြာ၊ မမသီရိ ၊ မင်းဇော်ဟိန်း၊ သီဟသစ်၊ မနောသား၊ နှင်းသောက်ပန်း ၊ အိမ်မက် ၊ လင်းကြယ်ဖြူ၊
၀လုံးဝိုင်းဝိုင်း၊ မိုးခါး၊ ကိုတိုး၊ နွေးနွေးသဲမွန်၊ ရဲဝင့်သူ၊ ကိုရင်ညိန်း၊ စိတ်စမ်းရေ၊ အိုက်ခီလောက်၊
မေတ္တာရောင်ပြန်၊ ၀င်းဇော် နဲ့ ကောင်လေးအိမ် တို့ကို လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတွေ့ဖူးကြပင်မဲ့ အခုလိုမျိုးလာရောက်လည်ပတ် အော်ဟစ်ကြတဲ့အတွက် ကျွန်တော် အထူးပင် ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။
နောက်အားတိုင်းလဲ လာလည်ပြီး အကြံဉာဏ်များ ပေးကြပါအုံးလို့ .....................
Posted by Ree Noe Mann at 8:02:00 PM 1 comment:
ကမ္ဘာ့ အချောဆုံး အမျိုးသား (၆) ဦး ရဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Tarkan Most handome Turkish man.... singer
Imran Abbas Most Handsome Pakistani ..... actor
Most handsome South African man!!!
Posted by Ree Noe Mann at 12:18:00 AM2comments: